Magaca iyo Sawirka Wiil Soomaali ah oo shalay weerar qasaaro daliyay ka fuliyay dhismaha Jaamacada Ohio. * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By A warsame	 On Nov 29, 2016
Cabdirisaaq Cali Cartan ayaa gaari yar uu watay waxa uu jiirsiiyay dad ku sugnaa Dhismaha Jaamacada, waxa uuna xiligaa kadib dadka qaarkood ku weeraray toorey uu watay., waxaana weerarkan ku dhawacamy 11-qof.
Ciidanka booliiska ayaa markii dambe toogasho ku dilay Cabdirisaaq Cali Cartan , waxa ayna hada wadaan booliiska baaritaano ku aadan weerarka uu geestay Wiilkan Soomaaliga ah balse heesta dhalada dalka Mareykanka.
Muslimiinta kuool gobolka Ohio gaar ahaan Soomaalida ayaa si kulul u dhaleeceeyay weerarkan uu geestay Wiilka Soomaaliga ah, waxa ayna weeraraasi ku tilmaameen mid laga naxo aysan raali ka aheyn.
Wiilka weerarka geestay ayaa dadkii yaqaanay waxa ay sheegeen in uu ahaa wiil afgaaban oo inta badan aan dadka soo dhax galin sidoo kale waxa uu aad ugu xirnaa masaajida kuyaala gobolka Ohio oo diinta ka baran jiray.
Maamulka Jaamacada ayaa sheeay in hada xaalada ay tahay mid caadi ah ayna soo afjareen ciidanka howlgalkii ay kawadeen dhismaha Jaamacada, waxa ayna Maamulka Jaamacdaa weerarkan ku tilmaameen mid ay ka naxeen oo argagax badan ku abuuray
Cabdirisaaq Cali Cartanohio